Zaw Lwin on Flipboard
10 Added | 1 Magazine | @thanthan5055 | Keep up with Zaw Lwin on Flipboard,aplace to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard createsapersonalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “Zaw Lwin”
မလေးရှား လေကြောင်းလိုင်းဟာ၊ ဒီနှစ်ထဲ လေယာဉ် ၂ စင်း ပျက်စီး ဆုံးရှုံး ခဲ့ရပြီး၊ ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ ထိခိုက် ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ ကြီးကြီးမားမား ကြုံတွေ့ လာရတဲ့နောက်၊ စီးပွားရေး ပြန်လည် နလံ ထူလာနိုင်ဖို့ အတွက်၊ ဝန်ထမ်း ဦးရေရဲ ၃ ပုံ ၁ ပုံ အရေအတွက် ဖြစ်တဲ့၊ လူ ၆ ထောင် လျှော့ချမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အမြတ်အစွန်းမရတဲ့ ခရီးစဉ်တွေကိုလည်း ဖျက်သိမ်းသွားမှာ ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံတော်ပိုင် လေကြောင်းလိုင်းရဲ့ စာရင်းကို၊ ဒီနှစ်ကုန် အမီ၊ stock exchange ဈေးကွက်ထဲက ဖယ်ရှားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယူကရိန်း အရှေ့ခြမ်း ဝေဟင်အထက်၊ သူတို့ရဲ့ လေယာဉ် ပစ်ချခံလိုက်ရတဲ့၊ ဂျူလိုင်လ နောက်ပိုင်း၊ လာရောက် စီးနင်းသူ ၃၀ % ကျဆင်း ခဲ့ရပါတယ်။
၃ နှစ် မကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ မနောပွဲ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်မှာ ပြန်ကျင်းပမည် ကချင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ၃ နှစ်ကြာ မကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ ကချင်ရိုးရာ မနောပွဲတော်ကို ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး လာမယ့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်နေ့ကနေ ၁၁ ရက်နေ့ထိ ၇ ရက်ကြာ ကျင်းပသွားဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ မနောပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ လာမယ့်စက်တင်ဘာလကစလို့ လုပ်ငန်းကော်မတီတွေ ဖွဲ့စည်းပြီး မနောပွဲတော်ကျင်းပရေးအတွက် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ မနောပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလခရိလအောင်က ပြောပါတယ်။ "အခုကျင်းပမယ့် မနောပွဲတော်က ၆၇ ကြိမ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ် မနောပွဲတော်ပေါ့နော်၊ မနောပွဲက ကျနော်တို့ အရင်လုပ်တဲ့အတိုင်းဆိုရင် ၂ဝ၁၅ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ကနေ ၁၁ ရက်နေ့အထိ ၇ ရက် ကျင်းပပါတယ်၊ အခုဒီနှစ် ပြန်ကျင်းပရအောင်ဆိုပြီး အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်တော့ ကျနော့်တို့ လာမယ့်စက်တင်ဘာလကစပြီးတော့ အစည်းအဝေးတွေလုပ်ပြီး ကော်မတီတွေဖွဲ့ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်၊ မနောပွဲလုပ်တဲ့အခါ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ဒီကောင်မတီကို ကြိုပြီးပြင်ဆင်ရတာပေ့ါ" ကချင်ရိုးရာမနောပွဲတော် ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက် ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်းက ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာ အစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြစ်ကြီးနားမြို့ စီတာပူရပ်ကွက်က မနောကွင်းမှာ ကချင်ပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တိုင်း ရိုးရာမနောပွဲတော်ကို ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ နောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Keep calm and say'Allah hu Akbar"
Yang maenan instagram,, lihat foto2 tentang Jogja mampir yuk --> www.instagram.com/jogjaku
Coming Soon Novel "Semestinya Cinta" ~ Izinkan Aku Memilikimu dengan Caraku by TERIMA KASIH IBU Sebuah novel romance islami tentang cinta dan keluarga, bagaimana pembelaan seorang ibu kepada anaknya, bagaimana penyesalan seorang ayah terhadap putrinya, bagaimana rindu seorang adik yang telah ditinggal pergi oleh kakaknya, bagaimana suka-duka seorang sahabat terhadap sahabat-sahabatnya. Sebuah novel yang mengharu biru diangkat dari kisah nyata. Segera beredar di toko-toko buku bulan September 2014. Penerbit QultumMedia FanPage
Assalam O Alaikum Wrb !! How are you all Lover's of Prophet Muhammad Peace Be Upon Him!! May Allah Bless you and your Parents! Remember me in your prayers
Subhanallah... so beautiful <3 (((((( how many shares for this beautiful pic )))))))
If your Heart is dead, know that the one who can give life to the dead body, can give life to your dead heart :) . .